Global Voices teny Malagasy » Any India, Andrasana Hijoro ho An’ny Hiram-pirenena Ireo Mpitia Sarimihetsika — Raha Tsy Izany · Global Voices teny Malagasy » Print
Any India, Andrasana Hijoro ho An'ny Hiram-pirenena Ireo Mpitia Sarimihetsika — Raha Tsy Izany
Voadika ny 02 Janoary 2017 6:10 GMT 1	 · Mpanoratra Kisholoy Mukherjee Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsimo, India, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Mandefa ny hiram-pirenena ny teatra Chennai alohan'ny ihodinan'ny sarimihetsika, mifanaraka amin'ny fanapahankevitry ny Fitsarana Avo. Pikantsary avy amin'ny Lahatsary Youtube novokarin'i Netalert The Hindu
Efa hatry ny elabe ilay fomba nentim-paharazana filalaovana ny hiram-pirenena any amin'ireo trano fijerena sarimihetsika Indiana, fa vao haingana no naneren'ny lalàna azy. Tamin'ny 2003, ny governemantan'ny fanjakan'i Maharashtra dia nanery hoe ny hiram-pirenena dia tsy maintsy alefa amin'ireny trano fijerena sarimihetsika ireny ao amin'izany fanjakana izany. Araka i Narendra Verma, mpanao politika izay nanolotra izany, tokony hampiray  ny vahoaka hiaraka izany hira izany rehefa lalaovina any amin'ireo trano fijerena sarimihetsika satria olona an-tapitrisa no mijery sarimihetsika isanandro.
Fa fanjakana tokana fotsiny izany. Ankehitriny, ny trano fijerena sarimihetsika manerana ny firenena dia tokony hilalao ny hiram-pirenena miaraka amin'ny sarin'ny fanevam-pirenena Indiana mialohan'ny fiatombohan'ny sarimihetsika, manaraka ny toromarika navoakan'ny  Fitsarana Avon'i India tamin'ny 30 Novambra, 2016.
Nilaza ihany koa ny fitsarana fa tokony ho arahan ‘ireo mpitia sarimihetsika ”ara-bakiteny sy ara-panahy” ilay lalàna, midika fa tokony mitsangana foana ireo manatrika raha toa ka mbola mandeha ny hiram-pirenena.
Taorian'ilay didim-pitsarana, ireo vahoaka any amin'ny trano fijerena sarimihetsika dia samy voatsikilon'ireo mpitandro filaminan'ny fanjakana sy ireo mitory tena ho milisy mpijery ireo tsy mitsangana. Efa nisy tatitra  mikasika ireo olona niharana herisetra noho izany antony izany ihany koa.
Araka ny tatitra iray tao amin'ny Hindustan Times, olona 12 no nogadraina, na dia mandritra ny fotoana fohy aza, tao Thiruvananthapuram, renivohitry ny fanjakana Indiana ao Kerala, tamin'ny filazàna azy ho tsy nanaja ny firenena tamin'ny tsy nitsanganany raha nalefa ny hiram-pirenena tao amin'ny Fetibe Iraisampirenen'ny Sarimihetsika tao Kerala . Narahina hetsika fanoherana tao amin'ny lalamben'ny fetibe ihany koa ireo fisamborana ireo. Nanamarika  ireo mpanao fihetsiketsehana fa ny fisamborana toy izany dia loza mitatao ho an'ny demokrasia.
Mpanoratra iray ao Kerala, Kamal C Chavara, no nosamborina  noho ny fiampangana momba ny fikomiana tao amina lahatsoratra manesoeso tao amin'ny Facebook izay nozarainy ho setrin'ny fitànana ireo olona voasambotra.
Eny fa na dia ireo manana kilemaina aza dia tsy afa-bela. Kilemaina mpanoratra sady mpikatroka mafana fo i Salil Chaturvedi, izany mampiasa seza misy kodiarana, no niharan'ny herisetra  avy any aoriana noho ny tsy fitsanganana.
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) 11 Desambra 2016 
Mipoitra ankehtriny ny zavatra natahorantsika ho voka-dratsin'ny baiko adaladala avy amin'ny SC mikasika ny hiram-pirenena. Mamporisika ny Fahamailinana izany!https://t.co/JzD57Ej7fo 
‘Mampanahy ny fitiavan-tanindrazana terena‘
Maro ireo hevitra manohitra ny lôjika ambadik'ilay didim-pitsarana. Ohatra, vehivavy Afrikana Tatsimo, izay niharana herisetra ny sipany Indiana noho ny tsy fitsanganany nandritra ny hiram-pirenena tao amin'ny trano iray fijerena sarimihetsika ao Mumbai, no nanindry  ny fomba nahitany hoe tery ilay fotokevitra fitiavan-tanindrazana satria afangarony tanteraka ny fisian'ny vahoaka samy hafa. Ankoatra izay, tsy mbola nanana fanoloran-tena amin'ny lafiny jeopolitka manoloana i India izy, fa tsy misy midika izany na kely aza hoe efa naniratsira ny firenena na ny hiram-pirenena izy.
Toa izany koa, ny sasany nanindry  fa ny fandefasana ny hiram-pirenena mialoha ny fiatombohan'ny sarimihetsika iray dia tena ompa ho an'ilay hira. Voamarika fa ilay ‘secularist’ , Ram Puniyani dia nanana fomba fijery  toy izany, tamin'ny filazàna fa ilay didim-pitsarana dia midika fanenana ny fahafahan'ny vahoaka. Hoy ny teniny:
Raha folo taona lasa izay afaka namoaka didy manome vàhana ny fahalalahan'ny tsirairay ny Fitsarana; ankehitriny ny fironana dia toa mifanohitra satria lasa mifotetaka tampotampoka teo ny ‘fitiavana ny tany niaviana, fitiavana ny firenena, fitiavan-tanindrazana’ . Ireo izay tsy miombon-kevitra amin'ny polisy dia lazain'ny fanjakana mitondra ankehitriny ho manohitra ny firenena, lazaina ho tsy ‘tia tanindrazana’ izy ireo.
Toy ny olona sasany izay tsy mandray ny jadona ho resaka matotra toy izany, tsy ny trano fijerena sarimihetsika rehetra no midina manaraka ilay fitsipika, manosoka hevitra ireo tatitra .
Mixed reactions have emerged on Twitter as well. Image maker Sanal Kumar Sasidhar  remarked:
Fihetseham-po mifangaro ihany koa no nameno ny Twitter. Nanamarika ny mpanao sary Sanal Kumar Sasidhar :
— Sanal Kumar Sasidhar (@sanalsasidharan) 9 Desambra 2016 
Mahatsapa malahelo ny hiram-pirenentsika. Mampanahy ilay fanindrahindrana tanindrazana an-tery #IFFK 
Mpampiasa Twitter antsoina hoe Suhail no nizara sari nà taratasy mahaliana nalefa ho an'ny tonian-dahatsoratra, amin'ny fiantsoana izany ho ”valiny tonga lafatra ho an'ny adihevitra momba ny hiram-pirenena”:
Mankany amin'ny trano fijerena sarimihetsika aho mba haka aina sy hampiala voly ny tenako, fa tsy ny hampiseho ny fitiavan-tanindrazako amin'ireo mpiray tanindrazana amiko. Ireo olona manontany mikasika ny fitiavako tanindrazana dia afaka n an-tranoko. Ataoko baiko ho azy ireo ny fihiràna ny hiram-pirenena mialohan'ny hidirany. -Prince Bharadwaj, Asansol
Fa ho an'i Yogesh Viswanathan, tena marika tsy fanajana izay azo ialàna tokoa ny tsy fitsanganana raha mandeha ny hiram-pirenena:
— Yogesh Viswanathan (@yogstwits) 14 desambra 2016 
#iffk  tsy afaka ny hitsangana mandritra ny 52 segondra ho an'ny #Hiram-pirenena  ianao? Raha tsy afaka mitsangana any ivelany mandritra ny 52 segondra ianao, aza manompa amin'ny fanaovana zavatra.
Zavatra mahaliana, ny sasany maneho hevitra  fa na eo aza ny didim-pitsaran'ny Fitsarana Avo, tsy mbola nitsangana ara-dalàna ny olona rehefa mandeha ny hiram-pirenena ao amin'ny trano fijerena sarimihetsika. Efa nisy fiampangana amin'ny fanitahan'ny fitsarana , satria ny fitsarana dia tsy tokony hitondra ny andraikitry ny mpanao lalàna:
Tadidio, tsy nisy na iray tamin'ireo torolalana ireo no tohanana didy amam-pitsipika. Tsy misy lalàna izay ampiharina, ary tsy misy zo fototra voahitsakitsaka amin'ny tsy fisian'ny lalàna toy izany. Izany, na izany aza, dia tsy manakana ny fitsarana toy ny fanaikeny ho an'ny tenany ny andraikitry ny mpanao lalàna, mpanantanteraka ary fitsarana ao anatin'ny indray mandeha, ny filazàna fahefana iray ivelan'ny-lalàm-panorenana izay tena mampiavaka tanteraka ny olon-dozabe.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/01/02/93843/
 tokony hampiray: https://www.quora.com/What-is-the-reason-behind-playing-national-anthem-before-a-movie-in-a-theater
 Fetibe Iraisampirenen'ny Sarimihetsika tao Kerala: http://iffk.in/
 niharan'ny herisetra: http://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/Patriotism-for-Dummies/articleshow/54905762.cms
 11 Desambra 2016: https://twitter.com/pbhushan1/status/807947412652244992
 Ram Puniyani dia nanana fomba fijery: http://www.countercurrents.org/2016/12/18/singing-of-national-anthem-in-cinema-halls-can-compulsions-elicit-respect/
 manosoka hevitra ireo tatitra: http://www.hindustantimes.com/india-news/most-rise-some-question-how-moviegoers-reacting-to-sc-order-on-national-anthem/story-ntUap0veGDLG7Lxu5TZWEK.html
 9 Desambra 2016: https://twitter.com/sanalsasidharan/status/807081335936389120
 nizara sari: https://twitter.com/tweepul/status/810377138452844544
 14 desambra 2016: https://twitter.com/yogstwits/status/808876312286953472
 maneho hevitra: http://www.firstpost.com/india/supreme-courts-national-anthem-order-mocks-judicial-process-constitution-3134204.html
 nitsangana : http://www.thehindu.com/news/cities/Madurai/no-need-to-stand-up-for-national-anthem-in-cinema-halls-hc-quotes-home-ministry/article7657173.ece